အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာမှာ သတိပြုရန်များ – ADS Myanmar Blog
ယခုအခါဆိုရင် အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားမှုတွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့် အလွယ်တကူ ပေးပို့လုပ်ဆောင်လာမှုတွေများပြားလာနေပါတယ်။ တခါတစ်လေမှာလည်း အလုပ်တွေရှာဖွေနေရင်း စိတ်ညစ်ရတာလေးတွေ ကြုံတွေ့ရတာတွေလည်းရှိတတ်သလို ၊ လိမ်ညာခေါ်ယူတာတွေကလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ ၊ လျှောက်ထားတော့မယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတချို့ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ နံပါတ် (၁) အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ www.ads.com.mm မှ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာအနေနဲ့ ကိုယ်လျှောက်မယ့် လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက် ၊ လစ်ဟင်းနေတဲ့ ရာထူးနေရာအတွက် ကြိုတင်လေ့လာထားပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ အင်တာဗျူးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်သလို ၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်လျှောက်ထားမယ့် လုပ်ငန်းနဲ့ တကယ်တမ်းထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ကြိုတင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးဖြေနေတဲ့အချိန်မှာလည်း လုပ်ငန်းရှင်အား မိမိထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သိရှိလိုတဲ့ အကြောင်းရာတွေကို မေးခွန်းများများ မေးမြန်းခြင်းနဲ့ ၊ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားမှုများအား လေ့လာကာ ဟုတ် ၊ မဟုတ် အကဲခတ်သိရှိနိုင်မှာပါ။
အွန်လိုင်းကနေဖြစ်ဖြစ် ၊ အလုပ်တစ်ခုရှာတော့မယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များးကို သတိထားပြုသင့်ပါတယ်။
– အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် သင့်အား အင်တာဗျူး မမေးမြန်းလိုခြင်း (သို့) မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဆုံခြင်း။
– ကိုယ်အလုပ်လျှောက်မည့် ကုမ္ပဏီနဲ့ပက်သက်သည့် အချက်အလက်အား အလွယ်တကူ မရှာဖွေနိုင်ခြင်း။
– သင့်အား ကုမ္ပဏီသို့ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် ဖုန်းဆက်ခိုင်းယူကာ ၊ ၄င်းတို့မှ ပြန်လည်မဆက်သွယ်ခြင်း။ (နိုင်ငံခြားတွင် ၀၇၀ (သို့) ၀၉၀ ဖြင့်ဆုံးသည့် ပရီမီယံဖုန်းနံပါတ်များထံသို့ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခိုင်းခြင်းများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။)
– သင့်အား ရုံးဝန်ထမ်းတူညီဝတ်စုံ …အစရှိသည်တို့အတွက် မိမိပိုက်ဆံဖြင့်အကုန်ကျခံ ၀ယ်ယူစေခြင်း။
– လုပ်ငန်းရှင်မှ သင့်အား ငွေလွှဲပေးပို့ခိုင်းစေခြင်း။ (ဥပမာ – Western Union ဖြင့်ငွေလွှဲခိုင်းခြင်းများ)
ထို့အပြင် အင်တာနက်ကနေတဆင့် အလုပ်လျှောက်ထားသူများသတိထားဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ လိမ်လည်သူအများစုဟာ အလုပ်အကိုင်ခေါ်ယူတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြင့် malware (သင့်ကွန်ပျူတာအချက်အလက်များကို ဖျက်စီးစေနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများ) ပါတဲ့ အီးမေးလ်များပေးပို့ပြီး ၊ သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကို ကွန်ပျူတာထဲမှ တဆင့်ရယူရန် ကြိုးပမ်းတတ်ပါတယ်။ ထို့အတွက် မိမိရဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို အမြဲ သစ်လွင်နေအောင် Update ပြုလုပ်ထားပါ။ ၄င်းထံမှ ပေးပို့လာတဲ့ ဖိုင်လ်များကိုဖွင့်ယူတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဂရုပြုပါ။
အလားတူ သင့်ရဲ့ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ် ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ တောင်းခံမှုရှိလာပါက သတိပြုပါ။ သာမန်အားဖြင့် မှန်ကန်သည့်အလုပ်ရှင်တို့သည် သင်နဲ့လူချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အခါမျိုးမှ ၄င်းအချက်အလက်များကို မေးမြန်းတောင်းဆိုလေ့ရှိတာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကမ်းလှမ်းတစ်ခုဟာ သာမန်ထက်ပိုမိုထူးခြားနေမယ်ဆိုရင် အထူးသတိပြုပါ။
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများအားလုံး ဘေးကင်း လုံခြုံစွာရှာဖွေပြီး ၊ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းနိုင်ကျပါစေလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး နံပါတ် (၁) အခမဲ့ကြော်ငြာကဏ္ဍ ၀က်ဘက်ဆိုက် www.ads.com.mm မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
အလုပ်ရှာဖွေနေသူများအတွက် သင်၏အကြုံပြုချက်များကိုလည်း ပေးပို့ ၊ မျှဝေခဲ့ပေးပါဦး။
သင်အသုံးမပြုတော့တဲ့ အပိုပစ္စည်းတွေကို မြန်မာပြည်ရဲ့ နံပါတ် ၁ အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက် www.ads.com.mm မှာ အခုပဲ အခမဲ့ ရောင်း ၊ ၀ယ် ရင်း အပိုဝင်ငွေရှာဖွေလိုက်ပါ။
Author: ADS BLOG
Ads.com.mm isaclassifieds website where you can post your ad for free withasimple click. Discover what individuals and professionals from all over Myanmar are selling, from used cars to furniture, real estate, jobs, mobile phones, or other used items, you can find everything you need! Makeagood deal in your city today! Visit us now at www.ads.com.mm.	View all posts by ADS BLOG
Author ADS BLOGPosted on August 10, 2015 August 21, 2015 Categories Tips and TricksTags အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာမှာ သတိပြုရန်များ
Previous Previous post: Ads of the week : Horse
Next Next post: အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အိမ်တွင်း အလှမွေးတိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်မှုမြင့်တက်လာ